3 Soffits အမျိုးအစားများနှင့် Fascia ရှင်းပြသည်
Soffits နှင့် fascia တို့သည်များသောအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်တစ်လုံးတွင်မမြင်ရသောအရာများဖြစ်ပြီးဘေးနံရံ၏ထိပ်ပိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်ထောင့်များတွင်တွေ့ရသည်။ မြင်ကြသူမြားအိမျတျောကိုတစ် ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် finish ကိုပေးပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အပြင်ဘက်ရှိကြမ်းတမ်းသောဒြပ်စင်များကြောင့်၎င်းတို့အား ၀ ိုင်းဝန်းအသုံးချနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အဆင်ပြေနေစေရန်နှင့်အစားထိုးရန်မလိုအပ်ကြောင်းအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အိမ်၌စစ်ဆေးသင့်သည်။ ၎င်းတို့ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်ဟုသင်တွေ့ရှိပါကသင့်တွင်ရနိုင်သော soffits နှင့် fascias အမျိုးအစားများကိုလေ့လာသင့်သည်။ ဤတွင်စာရင်းအနည်းငယ်ထဲကအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြထားသည်။ သင်တပ်ဆင်ရန်အချို့ကိုရွေးချယ်လိုပါကသင့်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
1. UPVC Soffits နှင့် Fascias
UPVC soffits နှင့် fascias ယနေ့ခေတ်ပို။ ပို။ လူကြိုက်များဖြစ်လာနေကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာများသည်အမြဲတမ်းသစ်သားဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်းယနေ့လူအများပလတ်စတစ်ပစ္စည်းကိရိယာများသို့ပြောင်းလဲနေကြသည်။ ၎င်းတို့တွင်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အဓိကတစ်ခုမှာစွမ်းအင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုထိရောက်ပြီးသင်၏အိမ်ကိုယခင်ကထက် ပို၍ ပူနွေးစေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လအနည်းငယ် (သို့) တစ်နှစ်အတွင်း ထပ်မံ၍ အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့် soffit အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းထက်ပိုဆိုးလာသည်။ UPVC အမျိုးအစားနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်လေနှင့်အတူပုပ်ပျက်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပါဝင်ပတ်သက်အများကြီးလျော့နည်းရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ရေရှည်တွင်သင့်ကိုငွေစုဆောင်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သင်၏အိမ်၏အသွင်အပြင်ကိုအမှန်တကယ်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပြီးယင်း၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
2. သစ်သား Soffits နှင့် Fascias
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကအိမ်တစ်လုံးကိုသင်ကြည့်ဖူးခဲ့လျှင်ဆိုဖာနှင့်ဖက်ရှင်အားလုံးနီးပါးသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းခံရသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်လူကြိုက်များသောအမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့ပြီးအိမ်အပြင်ဘက်တွင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးမျက်စိကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်အဓိကပြproblemနာမှာလူများသည်၎င်းသည်အလျင်အမြန်ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည်ကိုလူများနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းအတွက်ငွေများစွာသုံးစွဲလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ရေရှည်ငွေစုခြင်းအတွက်မကောင်းပါ။
3. Vinyl Soffits နှင့် Fascias
ဤ soffit နှင့် fascia အမျိုးအစားသည်သစ်သားနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ရေပုပ်ခြင်းနှင့်ရေထဲသို့ ၀ င်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ရှိရှိပြီးသား soffits နှင့် fascia ကိုအစားထိုးလို။ မလိုသောအမျိုးအစားကိုရှာလိုလျှင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယိုယွင်းလွန်းခြင်းအားဖြင့်ဗီနိုင်းပစ္စည်းများသည်အတူသွားရန်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုမကောင်းလျှင်ရေသည်ခေါင်မိုးပေါ်မှမကြာခဏယိုစိမ့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပုဆိန်သည်စိုစွတ်လာလျှင်၎င်းသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါကလျင်မြန်စွာပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ ဗီနိုင်းသည်ကြာရှည်ခံရုံသာမကသက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ်မျှသာမဟုတ်ဘဲယင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်သည်။ သင်မကြာမီမည်သည့်အချိန်တွင်အစားထိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Vinyl soffit (သို့) fascia ကမင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလည်းသက်သာစေမှာပါ။ ဒါ့အပြင်သင့်အိမ်အတွက်လုံခြုံမှုရှိစေမှာပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဤအမျိုးအစားများကိုရောင်းချသောကုမ္ပဏီအများစုသည်ရေကိုရေကိုထိန်းထားနိုင်သော်လည်းလေဝင်လေထွက်ကောင်းစေမည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။